တရုတ်ပလပ်စတစ် Cooler Box စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Huizhou
ပလပ်စတစ်အအေးခန်းဟုလည်းခေါ်သည့် HDPE အအေးသေတ္တာသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရှိဘဲတက်ကြွသောရေခဲသေတ္တာကဲ့သို့သောအအေးဘောင်တွင် passive insulation cooler box တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားသောအရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္withာန်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏အေးမြသေတ္တာများကိုများသောအားဖြင့်လတ်ဆတ်သောအစားအစာ၊ အစားအစာသို့မဟုတ်ဆေးဝါးနမူနာစသည့်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောအအေးခန်းဖြန့်ဝေရာတွင်အသုံးပြုသည်။
ပလတ်စတစ်အအေးခန်းဟုလည်းခေါ်သည့် HDPE cooler box သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမသုံးဘဲပလပ်စတစ်အအေးခန်းအအေးတွင် passive insulation cooler box တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားသောအရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္withာန်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏အေးမြသေတ္တာများကိုများသောအားဖြင့်လတ်ဆတ်သောအစားအစာ၊ အစားအစာသို့မဟုတ်ဆေးဝါးနမူနာစသည့်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောအအေးခန်းဖြန့်ဝေရာတွင်အသုံးပြုသည်။
2.HDPE (High Density Polyethylene) ပစ္စည်းသည်ဓာတုဗေဒအရတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်ခံ့မှုနှင့်မာကျောမှုရှိသည်။ အထူးပစ္စည်း HDPE ၏သဘောသဘာဝကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ HDPE အအေးသေတ္တာသည်သင်၏တင်ပို့မှုကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေရန်အလွန်ခိုင်မာသော၊ တာရှည်ခံခြင်းနှင့်ချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၃။ အခြေခံအားဖြင့် cooler box သည်အတွင်း၊ အလယ်၊ ပြင်ပအလွှာ (၃) ခုပါ ၀ င်ပြီးအအေး (သို့) အပူကိုသေတ္တာအတွင်းသို့ပြောင်းခြင်းနှင့်ထွက်ခြင်းမှအကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်သည်။ အလယ်အလတ်အပူအပိုင်းသည်အတွင်းပိုင်းကိုအပြင်ဘက်ကမ္ဘာမှအပူစီးကူးမှုကွဲပြားခြားနားသောကိန်းများဖြင့်သီးခြားထားရှိရာတွင်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် PU နှင့် EPS ဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် PP, PS နှင့် PE ပစ္စည်းများကိုပုံသဏ္differentာန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။
1.HDPE cooler box သည်ထုတ်ကုန်များကိုကွန်တိန်နာတစ်ခုအဖြစ်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်ပါ ၀ င်သောအရာများကိုအအေးနှင့်ပူသောလေထုဖလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါကအပူ function ကိုအတူကြီးမားသောအရွယ်အစား၏အေးသေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ လတ်ဆတ်သောအစားအစာလယ်ကွင်းများအတွက်၎င်းတို့သည်အသား၊ ပင်လယ်စာ၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများ၊ အေးခဲသည့်အစားအစာများ၊ ရေခဲမုန့်၊ ချောကလက်၊ သကြားလုံး၊ ပန်းများ၊ နို့များနှင့်စသည်တို့
ဆေးဝါးအသုံးချမှုအတွက်အေးခဲသေတ္တာများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဓာတုဗေဒဓါတ်ကူပစ္စည်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနမူနာများ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသမှုဆေးဝါး၊ ပလာစမာ၊ ကာကွယ်ဆေးအစရှိသည်တို့အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဤအခြေအနေတွင်အပူချိန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
4. တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့သည်ဂျယ်ရေခဲအထုပ်သို့မဟုတ်ရေခဲအုတ်များနှင့်အတူပြင်ပတွင်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်အဆင်ပြေသည်။ တောင်တက်ခြင်း၊ စခန်းချခြင်း၊ ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်း၊
ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့ 5.Strong ။
လတ်ဆတ်သောအစားအစာ, ပြင်ဆင်ထားမုန့်ညက်နှင့်ဆေးဝါးများအတွက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်တင်ပို့ဘို့ 6. Excellent က။
1. အအေးသေတ္တာအရွယ်အစားသည်ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဆေးဝါးများတင်ပို့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အပြင်ဘက် လှုပ်ရှားမှုများ။
သင်၏သတ်မှတ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ အလယ်အလွှာအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအပူပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ရှေ့သို့ EPP Cooler Box